PV Radio News June 3rd 2021 : NUG-CIT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့ ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ၊ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်တို့အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်
တစ်ပတ်အတွင်း မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ်ကို မြန်ဆန်ပြည့်ဝအောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး တိုက်တွန်းကြောင်း အာဆီယံ-အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပူးတွဲကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြ
အမေ့ထီး ကမ်ပိန်း နှင့် တော်လှန်ရေးစကားဝိုင်း
Radio NUG – 15th May, 2022 Evening
Radio NUG – 15th May , 2022 Morning
Radio NUG – 14th May , 2022 Morning
Radio NUG – 13th May , 2022 Morning
Radio NUG – 12th May, 2022 Evening
Radio NUG – 12th May , 2022 Morning
Radio NUG – 11th May, 2022 Evening
PV Radio News June 3rd 2021 : NUG-CIT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
· 12 months ago ·3 Comments
PVTV ရဲ့ တစ်နေ့တာ အစီအစဉ်တွေကို Internet Connection မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ ကြည့်ရှုဖို့ခက်ခဲမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ လင့်ခ်ကနေ အသံချည်း သွားရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
PV Radio ကိုလဲ မကြာမီတင်ဆက်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားစီစဉ်နေကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုပါတယ်။
ယင်းမာပင်မြို့နယ်ရဲ့ ရွာပေါင်းစုံသပိတ်ကလည်း ၃၇၄ ရက်မြောက်အဖြစ် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြ သပိတ်ပြုလုပ်
Like – 4.3K Share – 341
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် တော်လှန်သင်္ကြန်ရံပုံငွေစျေးရောင်းပွဲမှာ ဘွန်း တွေကို ရောင်းချပေးသွား မယ်လို့ NUG ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးထုတ်ပြန်
မတ် ၂၃ ရက် တိုက်ပွဲသတင်းများစုစည်းဖော်ပြမှု
PVTV ရဲ့ နေ့စဉ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Aung May Kyi says:
2021-06-04 at 4:00 PM
Min Thit says:
2021-06-04 at 5:25 PM
Bluetooth နည်းပညာနဲ့ သတင်းဖြန့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားကြသလား
သိကြတဲ့အတိုင်း သွားပြာကြီးဟာ အဝေးကြီး ဆက်သွယ်လို့ မရဘူး။ ၁၀ မီတာဆိုတာ ထိုင်ကုန်ပဲ
ဒါပေမယ့် ဘလူးတုရဲ့ အားသာချက်က အင်တာနက် မလိုပဲ ဖုန်းအချင်းချင်း သတင်းဖြန့်လိုရတာပဲ
အားနည်းချက်ကို သိပြီ။ အားသာချက်ကို သိပြီ ဆို ဘာလုပ်မလဲ
နွေဦး APP တခု လိုတယ်
အဲဒီ နွေဦး APP က မိမိပတ်ဝန်းကျင်နား အလားတူ APP ဖုန်းထားမှာ ရှိနေသူတွေ ဆီက
အသံဖိုင်နဲ့ စာဖိုင်ကို အလိုလို လက်ခံရရှိအောင် လုပ်ပေးတာပဲ
တဖက်လူက ကိုယ်နဲ့ သိသိ မသိသိ၊ နွေဦး APP မှာ တင်ထားတဲ့ စာဖိုင် အသံဖိုင်ကို အနားပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ နွေဦး APP အလိုလို ဝင်နေတာပဲ။ ဘယ်သု့ဖုန်းက ဝင်လာတယ်ဆိုတာ မဖော်ပြရဘူး
တခုတော့ လုပ်ရမယ်။ နွေဦး APP ထဲ အသံဖိုင် စာဖိုင် ထည့်သွင်းပေးတာကို သုံးစွဲသူ user က လုပ်ခွင့်မရှိဘူး NUG က နေ့စဉ်ထည့်ပေးရမယ်
ဖုန်းထဲ memory မစားအောင် date လွန် သတင်းနဲ့ ဖတ်ပြီး သတင်းကို ၃ ရက်ပဲ store ပြီး (save မထားရင်) အော်တိုမစ်တစ် ဖျက်ပေးတဲ့ စနစ်ပါရမယ်။
နောက်တခုအချက်က ဒီ နွေဦး APP ဟာ hidden လုပ်လို့ရတဲ့ option ပါရမယ်။ ဖုန်းထဲ သတင်းဝင်မှ နွေဦး APP က notification n ပေးပြီး တခါထဲ ဖွင့်ရင် ဖွင့်၊ မဖွင့် ရင် hidden ကို ပြန်ဖော်ပြီးမှ ဖတ်လို့ရမယ့် စနစ်ပါရမယ်… Hidden စနစ်မှာ password သုံးကြိမ်မှားထည့်ရင် အလိုလို APP ကို delete လုပ်တဲ့ စနစ်ပါရမယ်
နိုတီကိုလည်း ON / OFF လုပ်လို့ရတဲ့ option ပါရမယ်။
2021-06-04 at 6:02 PM
Subscribe 125,000 Subscribers
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့ ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ၊ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်တို့အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ် 2022-05-16
တစ်ပတ်အတွင်း မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2022-05-16
အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ်ကို မြန်ဆန်ပြည့်ဝအောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး တိုက်တွန်းကြောင်း အာဆီယံ-အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပူးတွဲကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြ 2022-05-16
ယင်းမာပင်ရဲ့ ရွာပေါင်းစုံသပိတ်စစ်ကြောင်းက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ၄၃၂ ရက်မြောက် ဆန္ဒပြသပိတ်ပြု လုပ် 2022-05-16
ရွှေဘိုမြို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသပိတ်ပြုလုပ် 2022-05-16
ယင်းမာပင်ရဲ့ ရွာပေါင်းစုံသပိတ်စစ်ကြောင်းက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ၄၃၂ ရက်မြောက် ဆန္ဒပြသပိတ်ပြု လုပ်
Thank you so much, 😊. We , more than 50...
Aung Naing Tun
Wait and see for another year?
Mya Phue Thit
ပြည်ထောင်စုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခမျိုးစုံ ပေးလာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည် ဖြစ်သွားအောင် နိမ့်ကျဆင်းရဲ လူလုံးမလှတဲ့ ပြည်သူလူထု...
Min Mrat Khaing
MIn Thu Aung
Super Human Beings – 92 0MAMA by Han Htue Lwin (May 4/2021)
We Will Haunt You_Poem (June 4/2021)